Public Health in Myanmar: Virginity (2) လူပျိုစစ်တယ် ပြောတာဘဲ
"နားနောက် Chickenpox ပေါက်နေရင်တော့ အံကျပေါ့။ " ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ ဆရာ။ အဲဒီ chickenpox ဆိုတာကို ဘယ်လို ကြည့်ရလဲဟင်။ အဲဒါလေး ပေါက်နေရင် လူပျိုမစစ်တာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ပေါ့နော်။
It was just added withasense of humor. Red spots can be seen in many diseases like acne, Rosacea, Boil, Folliculitis, Insect bite, Allergy, and etc. I mean it is not possible.
ဆရာ့ဆောင်းပါးတွေဟာ လူငယ်တွေအတွက် အလွန်အဖိုးတန်ပါတယ် ဆရာကိုကျေးဇူးတင်လျက်
အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Feedback ရတော့ ရေးတာတွေ-ပြောတာတွေ-လုပ်တာတွေမှာ အကျိုး များစေပါတယ်။
အဲလိုကျတော့ မိန်းမနဲ့ ယောကျာ်း ဘယ်တရားပါ့မလဲနော်...
မိန်းမကျတော့ သိရပြီး ယောကျာ်းတွေကျတော့ သူတို့ဘာလုပ်လုပ် မသိရဘူး...
လောကမှာ နေရာတကာ မတူတာတွေ အများကြီး မဟုတ်လား။ မတူပေမဲ့ တနေရာမှာ အားသာရင် တနေရာမှာ အားနည်းတတ်ပါတယ်။
ဆရာရေ ဒေါ်စုလည်းလွတ်မြောက်လာပြီ ဆရာတို့လည်းအမျိုးသားကျန်းမာရေးအတွက် နိုင်ငံမှာပြန်ပြီးတာဝန်ထမ်းရမယ့် အချိန် မြန်မြန်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်
ဆုတောင်းအတိုင်း ပြည့်ချင်ပါတယ်။ ဆုတောင်းပေးသူ ကျေးဇူး တင်တယ်ဗျာ။ မနေ့နဲ့ တမြန်နေ့က အလုပ်ရှုတ်သလား မမေးနဲ့။ နေ့စာ တနပ်၊ ညစာတနပ် လွတ်ရောဘဲ။ အထဲမှာ ခြင်ကိုက်ခံ စောင့်အိပ်သူတွေ လောက်တော့ ကိုယ်က မဆိုးပါဘူး။ ဒီကြားထဲ ကလေးတယောက် မွေးပေးရသေးတာ။ ကလေးဖွါးချိန်နဲ့ လွတ်သတင်း BBC ကနေ အင်တာဗျူးဘို့ ဖုန်းရချိန် အကိုက်ဘဲ။
Dr Swe,aleader of the National League for Democracy and Burmese leader-in-exile, speaks to NDTV on Suu Kyi's release from house arrest. Read more at: http://www.ndtv.com/video/player/news/overwhelmed-by-suu-kyi-s-release-dr-tint-swe/175572?cp
ဆရာကြည့်ပြီးပြီ အာဇာနည် ဘလော့မှာတင်ထားတာတွေ့လို့ ကြည့်ပြီးပြီ ဆရာသုံးသပ်တဲ့ အဖြေတွေကောင်းပါတယ်
ဆရာ သွားတစ်နှစ်တစ်ခေါက် ခြစ်ရင်ကောင်းလား
Khaing Thwet said...
အပျိုစစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ သွေးထွက်တယ်လို့ကျွန်မသိထားပါတယ် ကျွန်မက အိမ်ထောင်မကျခင်က အခြားလိင်ဆက်ဆံဖူးတာမရှိပါဘူး အပျိုစစ်ခဲ့ပါတယ် ပြီးတော့ပထမဆုံးညမှာလည်း သွေးထွက်ပါတယ်ဆရာ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ အမျိုးသားက ကျွန်မကို အပျိုစစ်တယ်ဆိုတာ မယုံဘူးလို့ပြောလာပါတယ် ဘယ်လိုထပ်ပြီးဖြေရှင်လို့ရအုံးမလဲရှင် ထပ်ပြီးအပျိုစစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်တဲ့နည်းရှိရင်ပြောပါအုံးရှင် ကျွန်မအမျိုးသားရဲ့အပြောအရ အချို့ လိင်မဆက်ဆံတာ ကြာရင် အဲလိုပဲသွေးထွက်တယ်လို့ပြောပါတယ် သူ့သံသယကြောင့်အိမ်ထောင်ရေးသိပ်အဆင်မပြေဖြစ်လာမှာအရမ်းကြောက်ပါတယ်ဆရာ ကူညီပါရှင်(သူကတော့ လူပျိုမစစ်ပါဘူးဆရာ သူကိုယ်တိုင်ပြောပြပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်မခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ်ဆရာရယ်)
ကို တိုက်ရိုက် အီးမေးလ် ပို့ပါ။
ကျန်းမာရေး နဲ့ ဆေးပညာ မေးလိုတာရှိပါက ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အသက်၊ ကျား-မ ပြောပါ။ လူနာမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ အတိအကျ ကိစ္စမရှိပါ။ ဖြစ်နေတဲ့ လက္ခဏာ ၁-၂-၃။ တခုတိုင်းက ဘယ်လောက် ကြာပြီ။ လိုအပ်ရင် ကျန်းမာရေး ရာဇဝင်၊ ဓါတ်မှန်၊ (အာလ်ထွာဆောင်း)၊ လိုအပ်ရင် အိမ်ထောင်၊ ကလေး ရှိ-မရှိ။ လိုအပ်ရင် နေတဲ့တိုင်းပြည်။ ဆေးနာမည်ရေးရင် Trade name ကုမ္ပဏီက ပေးတဲ့ နာမည် သာမက Generic name ဆေးနာမည် ထည့်ရေးပါ။ ဖုန်းဆက်ပြီး မေးရင် Time zone မတူတာရော၊ အသံထွက် လွဲနိုင်တာရောကြောင့် အဆင်မပြေပါ။ drswe01@gmail.com ကို (အီးမေးလ်) ပို့ပါ။ မာတိကာ အောက်ဆုံးမှာ ရှိပါတယ်။
ဆရာ လူပျို ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ နို့မ ချေပေးခဲ့လို့ ထင် ပါတယ် အခု အပျို နို့လိုပဲ ကြီးနေတယ်။ ကူညီပါဦးဆ၇ာ။အသက် ၂၄နှစ် နေ၇ာ မ လေးရှား kl
ဆ၇ာ..ကျွှန်တော်hiv test ကို 6လလောက်နေပြီးမှ စစ်ခဲ့ပါတယ်..hivမ၇ှိဘူးလို့ပြောပါတယ်...အဲဒါယုံလို့၇ပါသလား?
ဆရာ့ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်..နောက်သိချင်တာ တစ်ခုက အပျိုစစ် မစစ် တင်ပါးကြည့်လို့ ရတယ်ဆိုတာ ..ဘယ်လိုကြည့်နိုင်တာလဲ ..
ခွန်အောင် ခမ်း said...
moe nut nwal said...
မိန်းမတွေဓမ္မတာမလာရင် အသက်ရလာလို့လေ ခေါင်းးမူးတာ အစာမစားချင်တာ အကြောတွေတက်တာ ဖျားတာ ဘာမှမလုပ်ချင် မကိုင်ချင်ဖြစ်တာ တွေကို ရှေ့ဆက်ပြီး ဘာလိုနေထိုင်ရမယ် ဘာဆေးတွေသောက်ရမယ်ဆိုတာ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါဆရာ